Global Voices teny Malagasy » Fiteny : Rakibolana Nouchi Amin’ny Aterineto, Nangonina Avy Any Ifotony · Global Voices teny Malagasy » Print
Fiteny : Rakibolana Nouchi Amin'ny Aterineto, Nangonina Avy Any Ifotony
Voadika ny 19 Jona 2018 5:52 GMT 1	 · Mpanoratra Laila Le Guen Nandika Lauren RAJAOBELINA
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2012)
Raha manana fahalalàna fototra amin'ny teny frantsay ianao dia mety ho fantatrao ireo teny roa voalohany amin'ilay fehezanteny teo aloha, saingy ilay dikany hoe ” faly aho”- no mety tsy tao an-tsainao. Marina fa fomba fiteny mampiavaka ny Nouchi izay mety ho renao matetika eny an-dàlamben'i Abidjan, Côte d’Ivoire izany vao avy novakianao izany.
Raha adika malalaka, ny Nouchi dia teny kiriolona mifototra amin'ny teny frantsay, izay miankina amin'ireo fiteny ivoarianina maromaro amin'ny voambolany ary koa famoronana naolana avy amin'ny teny frantsay mahazatra. Hazavaina ao amin'ny Wikipedia  [fr] ny fiandohan'ny voambolana hoe ‘Nouchi’ :
‘Orona’ no dikan'ny hoe « NOU » amin'ny [fiteny] malinke raha volo (vatana) kosa no dikan'ny teny hoe “CHI”. Raha atao bango tokana, dia hoe ‘volon'orona’ izany hoe ‘volom-bava’ entina hilazàna ireo tovolahy ratsy, ilay iray tian'ny olona rehetra halain-tàhaka.
Tenin-jatovo fandre eny an-dàlambe fampiasan'ireo jiolahimboto ao an-drenivohitra, Abidjan no niantombohan'ny Nouchi, nefa nahazo lanja, ka tonga hatramin'ny famolavolan'ilay ivoarianina mpandalina teny, Blaise Mouchi Ahua,  ny rafitra fanoratana  mihitsy aza. Na sarotra aza ny manangana antontan'isa momba ny isan'ny olona mpiteny izany, ny fikarohana nataon'ny Pr. Jérémie Kouadio dia nahatonga ny fehin-kevitra he mety ho fiteny voalohany ampiasain'ireo tanora 10 ka hatramin'ny 30 taona ny Nouchi.
Na tsy tsara laza tamin'ny rehetra sy voaràra manokana tany an-tsekoly sy tany amin'ny rafi-panjakana aza ny Nouchi, dia nisy tetikasa natao hoe Nouchi.Mobi niandraikitra ny fananganana rakibolana nangonina avy tamin'ny vahoaka amin'ny aterineto  ho an'ilay fiteny :
[…] tsotra ny fiasan'ny Nouchi.mobi, toy ny rakibolana iray izay ny mpikambana ihany no mampiditra ny teny sy ny fomba fiteny ao. Fampiharana ara-tsosialy izy ary mifototra amin'ny hevitra hoe ‘crowdsourcing’ (fanangonana avy any ifotony) izay hitrandrahana ny fahalalàna iombonana hanatrarana ny tanjona, ka amin'ity tranga ity dia ny firaketana ny fiteny nouchi.
Noho ny fisian'ny Nouchi.mobi , dia hita ao amin'ny aterineto ny teny toy ny hoe dôgôfari (sipa) na ny yaako (mampalahelo). Hatramin'izao, ny teny tsirairay ao amin'ny rakibolana dia ahitana ny teny Nouchi, ny dikany amin'ny teny frantsay mahazatra sy ny ohatra fampiasàna azy amin'ny sehatra iray. Azon'ny mpisera ampiasaina ny fampiharana web na ny mombamomba azy amin'ny Facebook raha hanampy teny na hanao famaritana.
Tsy misy mahafantatra izay fanohanana ho voaangony, fa ilay mpandraharaha ara-tsosialy Abou Koné (@abookone ), mpandrindra rindrambaiko any Etazonia amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fanampian'ilay mpanome endrika Giovanni de Souza monina any Benin no nandrisika io hetsika io.
Efa an-dàlana ny andiany ho an'ny iPhone sy ny Android, satria ny tanjon'ilay tranonkala dia ny hanjary sehatra finday ho fampiroboroboana sy ho firaketana ny Nouchi. Amin'izay lafiny izay, dia tsy misy maha-samy hafa ny nouchi.mobi amin'ilay haba-tranonkala keniana sheng.co.ke  izay hita ho teboka iray enti-milaza manan-danja ho an'ny vondrom-piarahamonina miteny Sheng .
Endrika iray isehoan'ny Côte d’Ivoire 2.0 io, manasongadina ny fitaovan'ny haino aman-jery ara-kajimirindra, izay noheverina hatry ny ela ho'tenin-jatovo’ fotsiny ampifandraisina amin'ny jiolahimboto ary manindrahindra izany ho toy ny kolontsaina miroborobo an-tanandehibe.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/19/120831/
 Blaise Mouchi Ahua,: http://www.afriqueindex.com/articles/une-ecriture-pour-le-nouchi-argot-ivoirien.html
 rafitra fanoratana: http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/22/Ahua.pdf
 fiteny voalohany : http://nouchi-ivoirien.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=21
 rakibolana nangonina avy tamin'ny vahoaka amin'ny aterineto: http://www.nouchi.mobi/pages/home